Tsvaga zvinhu zvose pamusoro pezuva rekusasununguka - World March
Tsvaga zvose pamusoro pezuva rekusuruvara
musha » Tsvaga zvose pamusoro pezuva rekusuruvara
Mhirizhonga inoshandiswa senhumbi yekugadzirisa dzimwe nharo munhoroondo yese yakakonzera matambudziko makuru muhukama huripo pakati pemagariro akasiyana-siyana uye mararamiro. Parizvino, masangano akasiyana-siyana anoshanda zuva rimwe nerimwe kuti akurudzire kuonekwa kwemajeri akasiyana akasika zviitiko zvakadai zuva rekusuruvara uye mazuva akafanana, akaenzana nehurukuro iyoyo. Mugore rose isu tinogona kuwana mazuva akasiyana echinangwa chekuita kuziva kwezvinetso zvinoda kuonekwa. Pakati pemazuva ane chokuita nechisimba iwe unogona kuwana zvakakosha zvakadai semusi wepasi rose wekusagadzikana.
Nhoroondo yakave yakagadzirwa pamusana pehondo, hondo dzisingagoneki uye kukanganisa kwekodzero dzevanhu. Emadzimambo akasika nekuda kwekuparadzwa kwevanhu, kuputsa kwekusununguka uye kuiswa muhupenyu hwehupenyu hwevanhu. Zvichienderana nhoroondo nguva dzomunyika kunge ndokugadzira zvakasiyana Hurumende zvivako uye udzvinyiriri, uye kunyange mumatanho zhinji dzimwe tsika vakava mitumbi kuti kusimudzira kodzero, pagara paine mapoka kuti kuramba kunze pamutemo varikumahombekombe, zvichiita kubviswa uye kurwisana navo.
Ndezvipi mazuva ekusununguka kwekusuruvara?
2 October: Mazuva Ose Okusvibisa
Sei zuva risina ruregerero nerunyararo?
November 25 zuva rekusarura vakadzi
Chikonzero chekuvapo kwezuva rino: November 25 zuva rekusasvibisa vakadzi
Sei uchikurudzira kupemberera kwezuva raNovember 25 kusasuruvara?
January 30 zuva rechikoro chekusagadzikana uye rugare
Sei zuva rekusasuruvara nerunyararo richipemberera paC30 munaJanuary rakasarudzwa muzvikoro?
19 November pasi rose zuva risina utsinye kune vana nevechidiki
Zuva rose rekusasununguka uye kudzivirira kushungurudzwa kwepabonde nekushungurudzwa
Zviratidzo zvechisimba chevana
Chirevo chekupedzisira pamusi wepasi rose wechisimba chisingaiti chisarudzo
Spain inotungamirira nyika kuti iende kune rimwe zuva rose rekusasununguka
Kushamwaridzana kwevanhu vanobatanidzwa International day of nonviolence Kune dzakawanda. Uye kune mazuva mazhinji ekusava nechisimba mukerenda, yakatarira pane dzimwe nharaunda dzevanhu, dzakadai se:
Zuva remwana risina urombo
Zuva re25 rokusasvibisa vakadzi
Zuva rose rekusava nehanya, riri muna October 2
I30 yaJanuary, Zuva reChikoro Chekusaremekedza kwatisingafaniri kukanganisa nezuva rekusununguka kwevana
Zuva reMarudzi Rese rekusatendeseka nerugare.
Vakatosvika kunoshanda muminda siyana pamusoro peshoko, ivo vaise pfungwa rokurwisa mhirizhonga sectors siyana uye vane zvakafanana chinangwa: mukana zvokuzviuraya chero tsika chisimba kuti ariko munyika, achiita rugare kusvika zvose kumakona enyika, uye saka vagari vemo vanogona kuva nekodzero nemabasa
Zuva rose rekusava nechisimba IOctober 2 inorangarirwa, sezvo ndiyo nguva yekuti kupemberera kuberekwa kwaMahatma Gandhi. Uye ndeyekuti uzivi weGandhi hunobva mukushandiswa kwekukurukurirana kwekugadzirisa kwekupi kwekupesana.
Raiva gore 15 2007 June, apo United Nations General Assembly akataura pakaitwa chisarudzo 61 / 271, 2 October kuti hapana mhirizhonga raizova zuva akasarudzwa. Zuva iri rekusasuruvara rave richishandiswa senyika inofanirwa kurangarira vanhu vakasiyana-siyana vanozviratidza vakarwa muhupenyu hwavo hwose kuti vawane sangano rakarurama.
Chimiro chakakonzerwa neZuva reNyika rekusasvibisa chinoratidzirwa sekurwa kwekodzero dzevanhu uye kushanduka kwevanhu, nekuti chinangwa chaicho ndechekuchengetedza hupenyu hwevanhu nekushandisa rugare sechishandiso.
Vakawanda vanoshamisika kuti zuva rekusava nehanya chii, uye sei zuva rerugare uye risina ruregerero rinonzi. Uye iyo inofanana nedzimwe nyanzvi ine International Day yekusatendeseka, inobatsira kusimbisa nyika yose pamusoro pekushandisa zvakanyanya zvechisimba mukugadzirisa kwekupesana pakati penyika uye mukati mavo.
Naizvozvo October 2 zuva vasiri mhirizhonga, ndiyo mukana masangano akasiyana kubata zviitiko zvinoratidzira kunyanya mhirizhonga munyika, zvose zvakananga uye subliminally. To vanoti nhasi yokusaita chisimba iyo ichiri vanobishairira unogona kubatanidzwa anofamba zvakarongwa mhiri nyika, kana kubatana neshamwari kushanda muimba kusika zuva rugare uye nonviolence kuburikidza kusangana Ezvemutauro uye kuremekedza.
Nokuda kwechikonzero ichi, kana iwe uchida kubatanidzwa mumusi weOctober 2 zuva rekusununguka mune zviitiko zvakasiyana-siyana zvinoitika mumaguta nemaguta, zvakanakisisa kuswedera kushamwari yakabatana ne zuva rekusuruvara uye rugare uye vauye kuzoshanda mavari.
Zvakakosha kuziva zuva racho, sezvo zvakajairika kuti uwedzere kufungidzira kuti izuva raNovember 2 zuva rose rekusasununguka, apo tinofanira kusimbisa, kuti i2 yaOctober. Uye pane dzimwe nguva unowana ruzivo rwakashata paInternet iyo inogona kutungamirira mukuvhiringidzika.
Iyi nhaurwa ndeimwe yeyakakosha uye ikozvino iri mumuromo wenyika yose. Chinokonzera ndechokuti chisimba chakanyanyisa kune vakadzi ndechimwe chekurohwa kuri kuita kuti zvive zvakaoma kuti mararamiro arambe achibatana.
El 25 November zuva renyika dzese pasi pemhirizhonga kune vakadzi, inofanirwa kuita kuti zviratidzo zvionekwe zveboka iri uye kuti munguva dzakawanda dzinoshorwa kana zvinyararire.
Chisimba pamusoro pevakadzi chinosanganisira zviito nemamiriro ezvinhu zvakadai sechisimba chebonde, chisimba chisina kukodzera, kushungurudzwa, kubata chibharo kana kusagadzikana kwemari, pakati pevamwe.
Zvose izvi zvinoreva kuti vakadzi vanoonekwa sevasina maturo mumamiriro ezvinhu akawanda kana vachienzaniswa nevarume, kana ivo vanogoverwa mabasa ehutano nekuda kwechinhu chekuva vakadzi, sechikamu chekuchengeta kana mudzimai weimba.
Mhirizhonga yakasimbiswa pahutano hwevakadzi ndiyo imwe yevakapararira zvikuru, kurwisana naro. Mugore re 1993, Chirevo pamusoro pekuparadzaniswa kwechisimba pamusoro pevakadzi chakabudiswa neUnited General Assembly. Uye inofungidzirwa kuti kuitira kugumisa kudai kwe 25 zuva rekusagadzikana uye rugare Izvo zvinodikanwa kuti vese vasikana nevakadzi (avo vanonyanya kuita hafu yehuwandu hwepasi rose) vanogara vasingatyi, pasina mhirizhonga mudzimba, munharaunda yakachengetedzeka uye yakavanakira.
Uye apo Ichokwadi kuti sezvo 25 November 2017 mhirizhonga makatanga kuona vamwe kubudirira kurera kuziva nyaya iyi kusvikira kodzero zvisina kubudirira, vazhinji funga kuti makambani yose havasi kufambira mberi zvakanaka uye zvakaenzana kune imwe tsika, kwakavakirwa zvinokosheswa nokururama uye kushivirira.
The January 30 zuva rechikoro rekusuruvara uye rugare Kuyeuka kwekufa kwaMahatma Gandhi, uyo aiva mutungamiri wenyika uye wemweya weIndia, inopembererwa. Zuva iri rinochengetwa kubva mugore ra 1964, asi raive risati rasvika gore ra 1993 apo UN yaizviziva.
El January weZvino Zuva Rokunyengedzera 30, zviito zvakasiyana-siyana zvinoitwa muzvikoro kusimudzira runyararo munyika. Izvo zvinowanzoitirwa zuva iri rechikoro chekusina chisimba uye rugare kuitika mabasa, akadai nhau yerugare uye isingarevi, kana nziyo dzine chokuita norugare dzinoimbwa uye dzinokurudzira mamiriro ezvinhu ari kurarama munyika kana kune imwe nzvimbo munyika.
Zuva rino rakasarudzwa nedzimwe nzvimbo dzokudzidzisa kuita mabasa akasiyana nevana vaduku. Mazuva ano anowanzotarisirwa mumwana uye padanho rekutanga, uye zvinotarisirwa kuti vana vaduku vanoziva zviyero zvinomiririra kusununguka kwekusagadzikana uye rugare. Pakati pevamiririri vakawanda ndivo Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Amai Maria Teresa weCalcutta kana Martin Luther King.
Zvakakosha kuti kubva paudiki tinoshanda nevana vaduku pane zuva rose rekusasvibiswa, uye mazuva ese ari kubatanidzwa mukarenda ane chokuita nezuva rorugare uye risina ruregerero, zvakadai semusi wepasi rose kurwisana nechisimba 25 November, the 2 October musi wekusagadzikana uye rugare kana zuva rechikoro chekusagadzikana uye kushungurudzwa.
INovember 19 ndiyo zuva rehucheche uye jaya risina urombo, inofanirwa kuita kuti kuonekwe kushungurudzwa kunoitwa kumuduku. Yaiva mugore re2000 apo zuva ranhasi rakasarudzwa nekusarudzwa kuitira kuti zviratidze hurongwa hunokurumidza uye hunobudirira neHurumende. Mukuwedzera, yeNovember 20 inorangarirwa mukubatana kweZvamwe Zuva revana.
Zuva rekusava nechisimba kuvana rinoshandiswa kukurudzira kuziva nezvezvinhu zvipi zvinowanzoshandiswa pakushandisa vana zvisina kunaka uye zvipi zvishandise zvavanogona kushandisa kusimudza mabhero evha evanhu vakuru vanovakomberedza.
Kushungurudzwa nekushungurudzwa kwevana uye vechidiki chinetso chinosangana nenyika dzose pasi rose. Uye iyo ndiyo nzira yekushandiswa kwechisimba haina kusiyanisa rudzi, nyika, tsika kana hukama hwevanhu.
ari zviitiko zvekushungurudzwa nechisimba kune vana vaduku vakaita mapoka emasangano uye hurumende hurumende dzinotanga kutora matanho, uye kushandisa maitiro ezvidzidzo uye alarm, kuitira kuti izvi zviitiko zviitwe kuzivikanwa uye zvingadaro zvigadzire zvirongwa zvekuita mumativi ese: mhuri, nzvimbo yepamusoro sematunhu ezororo .
Nyanzvi idzi dzakagadzira urongwa hwezvinowanzoitika zviratidzo zvinogona kuwanikwa kuvana nevechidiki kana vari kutambura kana kutambudzwa:
Zviratidzo zvepanyama: kukuvadza kune nzvimbo dzepedyo, dzakadai sokubuda ropa, kuputika kana utachiona.
Psychic zviratidzo: kutya, phobias, kurohwa kwemazuva ano, kurara kusingagumi. Unhu hwakaipa kana kuzvidzora muhutano hwakatowanikwa.
Maitiro ekutanga zvepabonde, kupandukira kwemhuri uye kuchikoro, kushanda kwakadzidza kuchikoro.
Uyu mutungamiri wakagadzirirwa kuitira kuti nhengo dzemhuri, shamwari kana vadzidzisi vagoona muzviratidzo zviduku zvikuru zvekushungurudzwa kunze kwekuti ivo vataure nemashoko kuti vauudze nezvazvo.
Zvinosuwisa, kunenge kuti zvose nguva yemarudzi zuva chisimba, nokuti zvose kukonana kuripo munyika, uye zvose dzevanhu muvanhu vose, vangava vanoonekwa yakabudirira kana kwete.
Zvichienderana nemitemo yenyika imwe neimwe nekufambira mberi kana kukanganisa mune kodzero dzayo, dzakasiyana-siyana zvechisimba zvinogona kuonekwa. Vanhu vazhinji vanogona kufunga kuti munyika dzakabudirira hapazove nechikonzero chokupemberera nyika zuva rinorwisana neusviolence, nokuti vanofunga kuti haasisipo kana kuti pane zvishoma kana zvakakodzera.
Asi zvinosuruvarisa kuti izvi zvinopesana, chisimba chiri chikamu chehupenyu hwevanhu, uye kubvisa icho pakutanga kunokosha kusimudzira ruzivo rwehuripo, uye kuita kuti zvionekwe mumamiriro ezvinhu zvipi zvinosvika pakujekesa, uye izvo zvinoonekwa sechisimba.
Spain ndiyo nyika inofungidzirwa kuti ndiyo nyika yekutanga muhurumende yezvematongerwo enyika, ine sarudzo inonzi inodzivirira uye inopa kodzero kune vose vayo.
Asi chokwadi ndechokuti muhuwandu hwemangwana akawanda enyika ino mave nemamiriro ezvinhu echisimba, zvose zviri pachena uye zvakajeka. Mhirizhonga mudzimba (iro zuva rakaita 25 November chisimba) rinoramba riri rimwe rematambudziko makuru ayo mafashamo evanhu ava.
Akazvisimbisawo akararama zvokukura umo ugandanga pangozi nezuva muupenyu vaigaramo. Pakati ratidziro zviito kunonyanyisa hanya kuti yave zvakananga kuona kunge 1 October mhirizhonga kwakaitika Catalonia nokuda referendamu yakanga truncated nokuda kuchengeteka mauto avo vakarohwa vagari nechisimba. Nekuda kwechikonzero ichi Zuva reNyika rekusasvibisa 2017 Yaiva yakakosha zvikuru.
Kana munhu achifunga kuti Spain ndiyo imwe yenyika dzakabudirira zvikuru, uye pasinei naizvozvo, zvinopesana zvakanyanya zvinopesana nekodzero uye kuchengeteka kwevanhu, zviri nyore kufungidzira zvinoitika mune dzimwe nyika dzine zvishoma kana kuti zvisiri zvema demokarasi kana akafukidzwa muhondo.
Nokuda kwezvikonzero zvose izvi kune masangano anokurudzira kurwisana kwekodzero dzevanhu, sezvinoitika Nyika Inotora Rugare Nekusagadzikana, avo vanoshanda gore negore, munyika yose kusimudza ruzivo pakati pevanhu nehurumende dzavo pamusoro pekukosha kwekusashandisa chisimba.